घर घरमा शिक्षण सिकाई कुना
जिल्लामै पहिलो पटक सुनिल स्मृती गाउँपालिका वडा नं ४ रोल्पाले शिक्षण सिकाइ कुनाको अवधारण अघि सारेको छ । वडा भित्र रहेका विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागी भन्दै वडाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको ह...
जिल्लामै पहिलो पटक सुनिल स्मृती गाउँपालिका वडा नं ४ रोल्पाले शिक्षण सिकाइ कुनाको अवधारण अघि सारेको छ । वडा भित्र रहेका विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागी भन्दै वडाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
एक घर एक शिक्षण सिकाइ कुनाको अवधारण अनुसार उक्त वडाले १५६ विद्यार्थीलाई एक एक थान टेवुल र कुर्सी हस्तान्तरण गरेको हो । विद्यार्थीहरुलाई घरमा अध्ययन गर्न सहिलो होस भन्ने उद्धेश्यले उक्त सहयोग गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । घरमा सहजताका साथ अध्ययन गर्ने वातावरण मिले विद्...
पढाइकै पिरलो !
दिउँसोको १ बजेको थियो । ‘हाप छुट्टी’ को समय । सवै विद्यार्थी तितरवितर थिए । कोही भलिवल खेल्दै थिए । कतिपय तीन÷चार जनाको समूह...
दिउँसोको १ बजेको थियो । ‘हाप छुट्टी’ को समय । सवै विद्यार्थी तितरवितर थिए । कोही भलिवल खेल्दै थिए । कतिपय तीन÷चार जनाको समूह बनाएर गफिदै थिए । एक घण्टाको समय विद्यार्थीका लागि ‘रिफ्रेस’ गर्न छुट्टाइएको हुन्छ । तर, कक्षा १० मा अध्ययनरत चारजना छात्राहरु एक घण्टाको पुरै समय यत्तिकै खेल फाल्दैनन् । चिसोको कारण उनीहरु बाहिरको प्राङगणमा बेन्च राखेर विज्ञान विषयको गृहकार्य गरिरहेका देखिन्थे । नजिक...
मुख्य मन्त्रीले पढाए कक्षा १० का विद्यार्थी
प्रदेश नं. ५ सरकारले बिद्यालयका लागि मेरो एक दिन अभियानको औपचारिक शुरु गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ मा रहेको माध्यमिक विद्यालय, कालाखोलाको कक्षा १० ‘ए’ मा पढ...
प्रदेश नं. ५ सरकारले बिद्यालयका लागि मेरो एक दिन अभियानको औपचारिक शुरु गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ मा रहेको माध्यमिक विद्यालय, कालाखोलाको कक्षा १० ‘ए’ मा पढाएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन ।
सरोकारवालाहरुको सामूहिक सहभागिताको माध्यमबाट सामुदायिक बिद्यालयहरुमा रहेका विविध समस्या तथा मुद्दालाई उजागर गरी शैक्षिक सुधारको अभियानलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट सुधार गर्ने उद्देश्यल...
लक्ष्मी जि.सी.प्रधानाध्यापक, जनचेतना आधारभूत विद्यालय, रोहिणी, रुपन्देहीशिक्षक बनेर त्यहाँ पुग्दा विद्यालयको भवन थिएन । आँपको बगैचामा पठन पाठन हुन्...
प्रधानाध्यापक, जनचेतना आधारभूत विद्यालय, रोहिणी, रुपन्देही
शिक्षक बनेर त्यहाँ पुग्दा विद्यालयको भवन थिएन । आँपको बगैचामा पठन पाठन हुन्थ्यो, विद्यार्थीको हाजिरी रजिष्टर शिक्षकले घर लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । विद्यार्थीहरु बस्नका लागि कितावसँगै बोरा ल्याउथे र लैजान्थे । पानी आउँदा, हावा लाग्दा पठन पाठन हुदैनथ्यो । जनचेतना आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापककी लक्ष्मी जिसीका भनाई हुन यि ।
२०५२ सालमा शिक्षक बनेर उक...
टिफिन बक्स र खाजाको व्यवस्थापन गर्दै बुटवल उपमहानगर
बुटवल उपमहानगर पालिकाले बालविकास केन्द्रका बालबालिकाहरुलाई टिफिन बक्स सहित दिवा खाजाको व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । बालबालिकाको नियमितता र स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी यस्तो गर्न लागिएको नगरप...
बुटवल उपमहानगर पालिकाले बालविकास केन्द्रका बालबालिकाहरुलाई टिफिन बक्स सहित दिवा खाजाको व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । बालबालिकाको नियमितता र स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी यस्तो गर्न लागिएको नगरपालिकाको भनाई छ ।
आइतबार बुटवलको कान्ति माविका बालविकास केन्द्रका बालबालिकाहरुलाई अभिभावकको उपस्थितीमा टिफिन बक्सको वितरण गर्दै उपमहानगपालिकाकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले कार्यक्रमको शुरुवाद गरेकी छिन् । टिफिन बक्सको वितरण गर्दै उपप्रमुख आचार्यले बालबालिकाले खाने खाजा र प्रयोग...
अनमी कुट्नेलाई कारबाही होला त ?
कपिलवस्तुको थुन्हिया बर्थिङ सेन्टरकी अनमी उषा केसीलाई कुटपिट गर्ने प्रतिबादी यतिबेला प्रहरी खोरमा छन् । कुटपिटपछि फरार शिवराज नगरपालिका ११, थुन्हिया घर भएका ३४ वर्षीय मोहफुज मुसलमान...
कपिलवस्तुको थुन्हिया बर्थिङ सेन्टरकी अनमी उषा केसीलाई कुटपिट गर्ने प्रतिबादी यतिबेला प्रहरी खोरमा छन् । कुटपिटपछि फरार शिवराज नगरपालिका ११, थुन्हिया घर भएका ३४ वर्षीय मोहफुज मुसलमान स्थानीयको सहयोगमा पक्राउ परे ।
कुटपिट गर्ने मुसलमानलाई स्थानीय र प्रहरीले खोजतलास गर्दा तत्काल फेला परेनन् । घटनाको अर्को दिन मात्र स्थानीयले फेला पार्न सफल भई प्रहरीलाई बुझाएका थिए । पक्राउ परेका मोहफुजलाई प्रहरीले शुरुमा ३ दिनको गरेको र पछि १५ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान...
भाषा शैक्षिक गुणस्तर मापनको सूचक होइन
कुमार भट्टराईकेन्द्रिय अध्यक्ष, शिक्षाका लागि राष्ट्यि अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल)शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रको अभियानमा परिचित नाम हो कुमार भ...
केन्द्रिय अध्यक्ष, शिक्षाका लागि राष्ट्यि अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल)
शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रको अभियानमा परिचित नाम हो कुमार भट्टराइ । अहिले उनि सिबीनको प्रवक्ता र शिक्षाका लागि राष्ट्यि अभियान नेपालका केन्द्रिय अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । २५ बर्षदेखि शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील भट्टराई सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षालयहरु रुपान्तरण हुनुपर्ने मान्यता राख्दै शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने...
छैन लोपोन्मुखको घरमा शौचालय
सरकारले रुपन्देही जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । तर लुम्बिनीको लुम्विनी सास्कृतीक नगर पालिका– ३ पडरियाका केही घरमा अहिलेसम्म शौचालन बन्न सकेको छैन । पडरिया स्थित भ...
सरकारले रुपन्देही जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । तर लुम्बिनीको लुम्विनी सास्कृतीक नगर पालिका– ३ पडरियाका केही घरमा अहिलेसम्म शौचालन बन्न सकेको छैन । पडरिया स्थित भूमिहीन लोपोउन्मुख नटूआ जातिको आठ घरधूरीमा अझै शौचालय बन्न नसकेको ती घर परिवारले बताएका छन ।
स्थानिय राजेन्द्र नटुवाले आफ्नो घरमा शौचालय नभएको बताए । उनले भने– मेरो जग्गा लुम्बिनी बिकास कोषले अधिग्रहण ग¥यो, यहा यसरी बसिराखेका छौ, पैसा छैन, कहाबाट चर्पी बनाउ हजुर ?...
रुपन्देही खुल्ला दिसामुक्त
लामो प्रतिक्षापछि रुपन्देही जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको छ । लुम्बिनीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको हो । जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई स...
लामो प्रतिक्षापछि रुपन्देही जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको छ । लुम्बिनीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको हो । जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई स्वछता समितिको निरन्तर प्रयासपछि जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश पाँचका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सावुन पानीले हात धोयर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । उनले जिल्लाका १६ वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुलाई जिल्लालाई पूर...
अस्पतालवाटै विरामी गायव !
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न भन्दै आएकी एक विरामी उपचार नै नगराई भागेकी छिन् । अस्पतालमा आएर पनि उपचार नपाएपछि उनी भागेकी हुन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान...
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न भन्दै आएकी एक विरामी उपचार नै नगराई भागेकी छिन् । अस्पतालमा आएर पनि उपचार नपाएपछि उनी भागेकी हुन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना भएकी घोराही उप–महानगरपालिका १२ की १३ बर्षीय सविता परियार अस्पतालबाटै हराएको अस्पतालमा कार्यरत एक नर्सले जानकारी दिएकी छिन् ।
अस्पतालले परियारको समयमै उपचार नगर्दा विरामी भागेको हो । राप्ति उपक्षेत्रिय अस्पताल रहदासम्म जेष्ठ नागरीक, असहाय, तथा गरीवहरुको निशुल्क उपचार...